Raw Methenolone Enanthate umgubo (303-42-4) hplc≥98% | AASraw
/ iimveliso / abanye / I-Methenolone Enanthate powder
Akukho kalo SKU: 303-42-4. Udidi: abanye
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-mass order ye-Methenolone Enanthate powder (i-303-42-4), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Methenolone Enanthate powder video
I-Methenolone Enanthate powder esisiseko Abalinganiswa
igama: I-Methenolone Inanthate powder
Ifomula yeMolekyuli: C27H42O3
Ubunzima Ezinto: 414.62100
Ukusetyenziswa kwe-Methenolone emininzi ye-Powder usebenzisa umjikelezo we-steroids
I-Methenolone Enanthate powder (i-CAS 303-42-4) ihlala ibizwa ngokuba yiPrimonabol Depot, Primo E, Primo Enathate.
I-Methenolone Inanthate powder / Primonabol Usage
I-Methenolone Inanthate powder esetyenziswa ngokuqhelekileyo njengendlela yokusetyenziswa kwegciwane.
Kwindoda, ngokuqhelekileyo ithatha i-100-200mg ngeveki, ngokwakho imeko, 200-300mg; I-300-400mg ilungile.Kuninzi i-600mg, engekho iiveki ze-8-12, Kubafazi, ngokuqhelekileyo i-50-100mg ngeveki.Ayekho ngaphezu kweeyure ze-4-6,
I-Methenolone Enanthate powder
Nangona i-steroid emnene, iziphumo ebezingalindelekanga zeMethenolone Enanthate (CAS 303-42-4) ipowder inokubandakanya:
ezinamandla, nezenzo ezingalunganga kunye neerogenic. Imiphumo yeAndrogenic ibandakanya i-acne, ukulahleka kweenwele ngokukhawuleza kwizinto ezibhekiselele kwindoda yesimo somzimba kunye nokukhula kweenwele zomzimba.Acne, ukukhawulezisa iinwele, ukukhula kweenwele zomzimba, ukunyuka kwamabhinqa (kubandakanywa kwiindawo ezahlukeneyo zokukhula kweenwele, ukubizwa bunzulu kunye nokwandiswa kwe-clitoris) amanqanaba okunyusa okwezinga eliphezulu legazi, njengokunyuka okanye ukunciphisa i-LDL cholesterol, ukunqanda ukuvelisa i-testosterone yemvelo, uxinzelelo lwebindi, ubuncinci bezinga lobunyibiliki besibindi.
I-Methenolone ephakamileyo I mi yalelo
Kwimihlaba yonyango, i-Methenolone Inanthate powder eluhlaza isetyenziselwa ukuphatha abantu abachaphazelekayo kwiimeko apho ukulahleka kwemisipha kunye nokulahlekelwa kwesisindo esinzima kuyimpawu. Ezinye izinto zibandakanya: i-immunostimulant kubantu abachasene nezifo, ukuchitha imeko, ukulungelelanisa ukulwa nemiphumo ukunyanga kwe-corticosteroid, kunye nokunyangwa kwe-osteoporosis kunye ne-sarcopenia (ukulahleka kwemisipha ehambelana nokuguga). I-Methenolone Inanthate ipowder eluhlaza, njenge-Anavar, njengobungqina obunomdla kwimiphumo yaso emibi eye yasetyenziswa kubantwana kunye neentsana ukwenzela ukukhuthaza ukuzuza ubunzima kwiintsana ezizalwe ngaphambi kokuba zingekho izibonakaliso zeziphumo ezibi okanye utyhefu [3 ]. Omnye unokukwazi ukubona ngokucacileyo apho ukukhishwa kwe-anabolic steroid kuvela ngaphakathi kwintlalo yezemidlalo kunye nokwakha umzimba, Ikhono le-Methenolone Inanthate powder eluhlaza ukuphucula umzimba wokhuseleko lunokuba luncedo kakhulu kubasebenzisi be-steroid nganye. Ukuba isistim somzimba sakho siphelile, uya kuba sempilweni kwaye ube nexesha elilula ukufikelela kwiinjongo zakho.
I-Methenolone Inanthate powder powder (CAS 303-42-4)
Indlela yokuthenga i-Methenolone Inanthate powder (i-CAS 303-42-4) esuka kwi-AASraw
I-Gestonorone i-acetate Powder (31981-44-9)
I-Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA) Powder (14605-22-2)